अनटेस्टेड विज्ञता र हाम्रो विकास
द्वन्द्वविज्ञ देशमा जति बढे द्वन्द्व त्यति नै बढ्दै गयो ।
आइतबार, २५ असोज, २०७७ १प्रतिक्रिया
‘तिमीले दिएको दान कहाँ जान्छ भनेर तिम्रो गुरुलाई कहिल्यै सोधेका छौ ?’ मेरो यो प्रश्नमा जाम्बियाको ब्राइटन एकछिन अलमलियो अनि भन्यो, ‘यस्तो प्रश्न सोध्नु नै हुँदैन । सायद तिमीले ईभको कथा पढेका छैनौं होला । भगवानले भनेको कुरा ईभले नमान्दा संसारमा संकट आएको हो, त्यसैले दान दिने र बिर्सने हो ।’ उसको अवोधपनामा अच्ममित भएँ म र मैले केही दिनअगाडि मेरो सुपरभाइजरले उनको अवकासपछि पादरी हुने योजना सुनाएको सम्झिए । मानिसहरुको जिज्ञासा र खोजी गर्ने स्वभावलाई कोमामा पु¥याएपछि सीमित टाठाबाठाहरुले कसरी मानिस, समाज र देशको दोहन गर्दारहेछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
हाम्रो समाज त्यही बाटोमा जाँदैछ । अन्धभक्ति र स्वार्थप्रेरित मानसिकता बढ्दै जाँदा मानिस, समाज, देश सबै अधोगतितिर लागिरहेको छ । स्वाभिमान स्खलित हुँदैछ र स्वविवेक कोमामा जाँदैछ । किन भइरहेको छ त यस्तो ? मैले आफूलाई नियाली हेरेँ अनि हामी वरिपरि भएका विज्ञ भनाउँदाहरुलाई हेरेँ, अनि हामीले किन विकास गर्न सकेनौं ? हामीले चाहेको रुपान्तरण किन आउन सकेन भनेर केलाउन कोसिस गरेँ । केही कुराहरु मेरा मानसपटलमा खेलिरहे । तिनैलाई यो लेखमार्फत् लिपिबद्ध गर्ने कोसिस गरेको छु । अपवाद जहाँ पनि हुन्छन् । त्यसैले मेरो लेखलाई पनि अपवाद छोडेर बुझिदिनु होला ।
विगत तीन दशकमा (२०४६ को प्रजातन्त्र स्थापनापछि) नेपालमा विज्ञ भनाउँदाहरुको बाढी नै लाग्यो । संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुबाट दीक्षित हजारौं नेपालीहरु स्वदेश फर्किए वा संसारका विभिन्न देशमा फैलिए । धेरैले धेरै किताब, लेख लेखे र आफ्नो विद्धता झल्काउँदै भाषण गरे होलान् । संसारका धेरै देशदेशावर घुमे होलान् र त्यहाँको अनुभवले खारिए होलान् । तर फेरि पनि नेपालका लागि काम लाग्ने सीमित मात्र भए । कृषिविज्ञले देशलाई कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन्, द्वन्द्वविज्ञले द्वन्द्व घटाउन सकेनन्, इन्जिनियरहरु एउटा गर्व गर्नलायकको सग्लो सडक बनाउन सकेनन्, शिक्षाविद्हरुले काम लाग्ने शिक्षा भित्र्याउन सकेनन् । सबै क्षेत्रहरु सकारात्मक होइन नकारात्मक नै छन् । किन त भन्दा सबैखाले विज्ञहरुले आफूले सुनेको पढेको वा जानेको भनेको विषय आफ्नो ठाउँमा टेष्ट गरेर कहिल्यै हेरेनन् । उनीहरुले सिकेको कुरा टेस्ट गरेर आफ्नो ठाउँ सुहाउँदो बनाउन सकेनन् ।
अनटेस्टेड किताबी विज्ञताले विज्ञहरुको आत्मविश्वास कहिल्यै जागेन । व्यवस्थापन विज्ञ पढाउन जान्ने भयो तर लडखडाएको एउटा संस्था व्यवस्थित बनाएर देखाउन कहिल्यै सकेन । द्वन्द्वविज्ञ देशमा जति बढे द्वन्द्व त्यति नै बढ्दै गयो । लौ यो द्वन्द्वको दिगो समाधान म गरिदिन्छु भनेर कुनै द्वन्द्वविज्ञ उदाएन । प्राविधिक विज्ञहरुलाई आजभोलि मानिसहरुले पावरपोइन्ट विज्ञ भन्न थालेका छन् । जो पावरपोइन्ट प्रस्तुति काइदासँग गर्न सक्छन् तर उनीहरुको विज्ञता खेतमा, सडकमा, नहरहरुमा देखिँदैन । यसरी डिग्रीधारी किताबी विज्ञहरुले आफ्नो विज्ञता कहिल्यै टेस्ट गरेनन् । उनीहरुमा आफूले बोल्ने गरेका कुराहरु हुन्छन् कि हुँदैनन भनेर भन्नसक्ने आत्मविश्वास कहिल्यै आएन र उनीहरु सधैं जी–हजुरी र अरुले लाए–अह्राएको काममै दोष जति अरुतिर देखाउँदै विज्ञताको पगरी गुथिरहे र प्रतिफल दिन सक्ने विज्ञ कहिल्यै हुन सकेनन् ।
विज्ञताविनाको लहडी विकास यात्रा
विकासमा नाराहरु हाम्रो देशमा जति सायदै कतै घन्किए होलान् । नामधारी विज्ञहरु पनि सायदै हाम्रा जति अन्ततिर होलान् । तर हाम्रा कामहरु अधिकांश देखाउन योग्य हुन सकेनन् । विज्ञका नाममा जताजता मानिसहरु पसे ती संस्थाहरु या त सकिए या कोमामा पुगे । आफूले गर्ने कामको आत्मविश्वास नभएकाहरु र नैतिकताका सबै धरातल पार गरेकाहरु आफ्ना कर्मदाताको आदेश र जी–हजुरीमा समर्पित भए । कर्मदाताको लहडी वा स्वार्थपुरित इच्छा जुनसुकै तरहले पूरा गर्नु नै उनीहरुको दक्षता र विज्ञता बन्यो । यो विज्ञताको पिसाइमा धेरैधेरै उम्रँदै गरेका उत्साहित युवाहरु पेलिए होलान् । जसबाट उनीहरु उर्लदो उत्साह केही गर्ने जाँगर या त मारियो या फेरियो वा पलाएन भयो । अनि बिस्तारै स्वामीभक्त, स्वविवेक बेचिएका विज्ञहरु बढ्न थाले, मौलाउन थाले र मानव मस्तिस्क, समाज, देशलाई धमिल्याउँदै लगे ।
कर्मदाताहरुको लहडी योजना र स्वार्थपुरित इच्छा पूरा गर्दागर्दै हाम्रा विकासका सपनाहरु भ्वाङ पर्दै गए, थलिँदै गए । परिणामतः हाम्रा विकासहरु मात्र थलिएनन् मनमस्तिस्क, स्वविवेक, नैतिकता पनि थलिँदै गयो । नकारात्मकता बढ्दै गयो र गइरहेको छ । साझाहितको ठाउँ व्यक्तिगत स्वार्थले लियो । मानिसहरु लामो सोच र दिगो योजनाभन्दा ‘तातै खाउँ जली मरौं’तिर आर्कषित भए । कसैलाई भोलिको आशा रहेन । त्यसैको परिणाम हाम्रो विकास यात्राले भोगिरहेको छ ।
आशाहरु सकिएका हुन त ?
आशाहरु सकिएका छैनन् । कुलमानहरुले रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरा देखाइरहेका छन् । हजारौं युवाहरु दुरदराजमा बसेर आफ्ना कर्म फलाइरहेका छन् । अनेकौ सकारात्मक उदाहरणहरु हाम्रा वरिपरि छरपस्ट छन् । यी सबै सकारात्मक उदाहरणहरुमा एउटा कुरा साझा छ । त्यो हो विज्ञता वा ज्ञानको परीक्षण वा टेस्टेड विज्ञता । जस्ले सुनेको, पढेको, देखेको कुराको आफूले परीक्षण गरे ती सबै आफूले टेस्ट गरेका कुरामा वा भोगेको कुरामा वास्तविक विज्ञ हुँदै गए । उनीहरुले आफ्नो परिस्थितिमा केले काम गर्छ, केले गर्दैन भन्ने कुरा जान्दै गए र आफ्ना रणनीतिहरु सोहीअनुसार बदल्दै गए । उनीहरुको आत्मविश्वास बढ्दै गयो उनी उनीहरु झन्झन् फैलिँदै गए । अनि उनीहरुको विज्ञताले परिणाम देखायो ।
हामीले आफूलाई टेस्टेड विज्ञ बनाउन सकेनौं भने हामीले छाँटेका किताबी विज्ञताहरुले केही परिणाम दिएनन् । विज्ञता प्रमाणित गर्न संख्यामा गनिएका प्रकाशनहरु, भाषणहरु यो देशका लागि उपयोगी नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले हो विभिन्न विकास रणानीति बनाउन गरिएका अध्ययन र लेखनहरु हाम्रा लागि अपवादबाहेक कुनै उपयोगी हुन सकेनन् । ती ठेली लेख्नमा विज्ञता देखाएकाहरुले अगाडि बढेर त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिइयोस् भनेर हाँक दिन र इच्छित परिणाम दिन कहिल्यै सकेनन् ।
वास्तविक विज्ञता नहुँदा आफनो कामप्रति आत्मविश्वास जागेन अनि हाम्रा विज्ञहरु कर्मदाताका आदेश कार्यान्वयनमा सीमित भए र अन्त्यमा परिस्थिति र कर्मदाताको आदेशलाई दोष दिँदै आफ्नो विज्ञताको कमजोरी ढाकछोप गर्दैरहे । त्यसैले कमजोरी अन्ततिर खोज्नुको साटो आफैंबाट सुरु गरौं । आफूले सुनेका, पढेका कुराको पहिला परीक्षण गरौं अनि आत्मविश्वास र नैतिक इमान्दारिताका साथ त्यसको बिस्तार गरौं । हामीले विकासको बाटो बदल्न सक्छौं ।
Namraj Dhami says:
This is the reality of our contemporary society. Nicely articulated the lapses we are facing. Thanks for sharing your thoughts Dr Upreti.
संक्रमित बढ्न थाले, दशैंपछि स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ
मानसिक रोगबारे खुलेर कुरा गरौं